Manchester United oo 55 milyan oo ginni ku raadineysa xiddig ka tirsan Bayern Munich | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Manchester United oo 55 milyan oo ginni ku raadineysa xiddig ka tirsan Bayern Munich
Manchester United oo 55 milyan oo ginni ku raadineysa xiddig ka tirsan Bayern Munich
Muqdisho – Sida laga soo xigtay wargeyska The Sun, daafaca kooxda Bayern Munich Mats Hummels ayaa lala xiriirinayaa kooxda Man Utd, laacibkaan ayaa qeyb ka ah naadiga Jarmalka ka dhisan ee Bayern Munchen.
Daafaca Jarmalka ah ayaa aad loola xiririnayey Manchester United tan iyo markii uu joogay Borussia Dortmund. Waxaana uu mar ku sigtay in uu dhaqaaqayo Old Trafford sannadkii 2014, inkastoo kooxdiisa ay ka horjoogsatay in la beeciyo.
Laacibkaan ayaa waayo xun ku qaadanaya garoonka Allianz Arena xilli ciyaareedkaan, Manchester United ayaa dooneysa inay bisha Janaayo u dhaqaaqdo daafacaan.
Ku guuleystaha koobka dunida ayaan qeyb ka aheyn dooqa koowaad ee Kovac. 29 jirkaan daafaca dhexe ayaa ka soo muuqday seddex kulan oo horyaalka ah lix kulan oo ay ciyaartay Bavarians xilli ciyaareedkan.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Germany ayaa haatan suuqa ugu jira 55 milyan euro. Si kastaba ha ahaatee, kooxda Bayern Munich ayaan dooneynin wax ka yar 65 milyan oo ay beecinayaan laacibkaan.
Inkastoo ay ku dhowaadeen inay u dhaqaaqaan Old Trafford sanadka 2014, waxay u eg tahay inay Manchester United bartilmaameed u noqon laheyd haddii uu Jose Mourinho maamulo inuu kooxda sii joogo ilaa bisha Janaayo.
Jose Mourinho ayaa qorsheynaya inuu hagaajiyo dhibaatada daafaca ee Manchester United xagaagan, isagoo si aad ah u doonayay inuu la soo wareego daafacyada Harry Maguire iyo Toby Alderweireled kuwaasi oo aad loola xiriirinayey daaqadii hore.
Previous: Hindiya: Daanyeer lagu aaminay inuu kaxeeyo gaari bas ah oo siday rakaab
Next: Dookha guur-takoor waa ka mamnuuc